ဘဝမှတ်တိုင်: Android Games GPK ဖိုင်များ Install လုပ်နည်း
Gpk ဖိုင်တွေဟာ Game apk ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့ဖိုင်ပါ.. ဆိုဒ်ပမာဏကြီးမားပါတယ်.. Gpk ဖိုင်တွေ ဖုန်းထဲကို Install လုပ်ဖို့ နည်းလမ်း (၂)ခု ရှိပါတယ်..
ကွန်ပျူတာကနေ ဖုန်းဆီကို တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းခြင်း
ဒီနည်းမှာ လိုအပ်တာက Gpk Install လုပ်တဲ့ Computer Software ရယ်..
ဖုန်းအတွက် ကွန်ပျူတာ Driver ရယ်
ဖုန်းမှာ USB Debugging နဲ့ Unknown Source ကို On ထားဖို့ရယ် လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်..
အပေါ်ကဟာတွေ အကုန်ဒေါင်းပြီး Install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့ USB ကြိုးသုံးပြီး ချိတ်လိုက်ပါ..
ပြီးရင် ကိုယ် Install လုပ်ချင်တဲ့ Gpk ဖိုင်ကို Double Click ခေါက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.. အဆင်သင့်လုပ်ပြီးသား Gpk ဖိုင်တွေလိုချင်ရင်တော့ http://www.muzhiwan.com မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ပိုင် GPK ဖိုင် ဖန်တီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရယူနိုင်ပါတယ်.. Gpk လုပ်နည်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်..
ဖုန်းတွင် Install လုပ်နည်း
ဖုန်းမှာ Gpk ကို Install လုပ်ဖို့ကတော့ muzhiwan gamehelper installer.apk ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို အရင် Install လုပ်ပေးရပါမယ်..
SD Card ထဲမှာ Gpk ဖိုင်ထည့်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်..
ပြီးရင် muzhiwan ကို Run လိုက်ပါ.. အောက်ကပုံမှာလို အစိမ်းရောင် Button လေးကိုနှိပ်ပြီး Gpk ဖိုင်တွေကို ဖေါ်ပြခိုင်းလိုက်ပါ..
ကိုယ် Install လုပ်ချင်တဲ့ Gpk ဖိုင်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင် တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့အကွက်ထဲမှာ ဘယ်ဘက်ဆုံးက Button လေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..
Install လုပ်နေတာကို မြင်နေရမှာဖြစ်ပြီး ပြီးသွားရင်တော့ ကစားနိုင်ပါပြီ..
Thanks to Android Apk User
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/06/2014 07:30:00 am